အတူဒါကြောင့်အနည်းငယ်ကောင်း၊အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားခရီးခန့်၊ဒါကြောင့်တကယ်ပေးဆောင်ဖို့ငွေထုတ်စစ်ဆေးသောအရပ်တို့ကိုမကြားရကြပြီ။ ယနေ့တွင်၊ငါလိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ Newgrounds:ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရမ်းကိုယ်ပိုင်အသိုင်းအကျိန်ပေးသုံးစွဲဖို့အလွန်အကောင်းဆုံးမှာအပြာဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရး။ ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပြီလွယ်ကူသောချဒီစုဆောင်းမှု၏အံ့သြဖွယ်ဂိမ်းအတူတူ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စစ်မှန်သည်ဟုယုံကြည်ကြပြီယခုအချိန်တွင်ရောက်ရှိဟုန်၏စက်မှုလုပ်ငန်း။, ကြောင်းမျှမအမှားလုပ်၊အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ Newgrounds အပြည့်အဝပေးအပ်ဖို့ကျူးလွန်တစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအတွေ့အကြုံများသောသူတို့သည်ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မကောင်းညမ်း။ ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစတင်အတွက်သြဂုတ်လ ၂၀၁၆၊နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဂိမ်းများ၊ယခုအထိုင်ပေါ်မှာတစ်အရည်ရွှမ်းအစုအကြောင်းကျွန်တော်မစောင့်သင်ပြ။ သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းရပ်တန့်နှင့်အတူဒုတိယ-အနှုန်းအချက်အချာအတိအမှိုက်နှင့်လုံးဝဘာမျှ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအပိုင်းအစများ၏အကြံဉာဏ်ဒီအကိုအသုံးပြုဖို့:နိမိတ်လက္ခဏာတက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းဟာဒီလက်ငင်းအရ၊အဆိုပါရေနံအဆင်သင့်ဖြစ်၊အပိတ်တံခါးကိုနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွေ့အကြုံလာမည့်အဆင့်အထိညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။, လို့မရပါကအကြောင်းပိုမိုသိရန်၊ရိုးရှင်းစွာဆက်ဖတ်ပေးမယ်ကောင်းတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်အဘယ်အရာကိုသင်မြျှောလငျ့နိုငျအထဲမှာရှာတွေ့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်အခုအချိန်မှာနှင့်အပေါ်ရရန်အတွက်!
သင်ငြီးငွေ့ရန်ရှိခြင်းပိုက်ဆံပေးချေနိုင်ရန်အတွက်လက်လှမ်းညမ်း။ ကျနော်တို့ကြားရတယ်၊အရာအတိအကျဘာကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ Newgrounds ပါဘူးတာဝန်ခံများအပြားမှအမိန့်၌သင်တို့အဘို့အတွင်း။ ဒီသဘောတူညီချက်သက်ဆိုင်သည်ခပ်သိမ်းသောတစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးကမ္ဘာအဝှမ်း၊မခွဲခြားဘဲဘယ်အစက်ကိရိယာပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်။ မကြာသေးမီကာလ၌၊အပင်အပင်ကုမ္ပဏီများပြပြီ၊သူတို့ကယ်မနှုတ်နိုင်ကောင်းဂိမ်းများ–ကျွန်တော်တို့အကြောင်းစဉ်းစားပေးခြင်းအားဖြင့်ပယ်ရှားကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၊ကျနော်တို့ကသေချာစေနိုင်ကျန်းမာဂိမ္းဂေလိမ့်မည်ကြောင်းအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်အတူတက်စောင့်ရှောက်ဖို့၏မျှော်လင့်ချက်များ။, ကျွန်တော်အောက်ပါအခြေအချို့သောကြီးမြတ်ခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့ဒဏ္ဍာရီ၏လိဂ်နှင့်လမ်းကြောင်းများနှင်:သူတို့သရုပ်ပြသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအားသွင်းဖို့ပိုက်ဆံစေနိုင်ရန်အတွက်ဒီဂိမ်းအကောင်းနှင့်အမြတ်အစွန်း။ တစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက် tween ကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့အကြောင်းအစားပူဇော်သက္ကာဘို့တ၊ဂိမ်းအများကြီး! ပါကခမဲ့သုံးစွဲခွင့်မှာအစဉ်အမြဲရရှိနိုင်:ကျနော်တို့ကကစားရန်အခမဲ့ဝက်ဆိုက်အစီအစဉ်ကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့။ အသင်သာအချိန်အစဉ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ဘာမှမသင်တို့ကိုပြုပါရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်။ လှူဒါန်းမှုများကိုကြိုဆိုနေကြသည်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အဓိကအစီအစဉ်၏ရန္ပံုေငြကိုယျ့ကိုယျအားဖြင့်အသေးစား၊nonintrusive။
တဦးပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့နှင့်အတူတွေ့ရှိအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောငါတို့ဥစ္စာအဖြစ်သသူတို့မကြာခဏရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးမြင့်မားသောအရေအတွက်ကိုဂိမ္းကစားခံရဖို့။ ဒီရလဒ်အတွက်ပြင်းထန်ကိစ္စများလျှင်သင်ကပျော်မွေ့ကြသည်မဟုတ်အသေးစားစုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်သူတို့ရှိသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ Newgrounds အစီအစဉ်ဒီအတန်ပြန်ရန်ရှိခြင်းအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းအနှံ့ဖြန့်ချိလူအစုအဝေး၏niches။ ကျနော်တို့အခန်းကဏ္ဍကို-ကစားဂိမ်း၊ချိန်းတွေ့ simulators၊ခံုးတိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းစဉ်နှင့်များသောပိုဟု့ဂိမ်းအဆသင်ချစ်ရန်သွားကြသည်။ ထို့အပြင်၊ကျနော်တို့ရောနှောနှင့်လိုက်ဖက်အနုပညာလက်ရာအကြောင်းဒါကြောင့်အသီးအသီးဂိမ်းဟာတစ်မူထူးခြားတဲ့ခံစားမှုနဲ့စတိုင်။, အားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတနာရီသို့မဟုတ်အချို့သောအယူစေခြင်းငှါပတ်ပတ်လည် ၁၀:ဒါဟာဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်အဘယ်အရာကိုသင်လို။ ယခု၊၏အရေအတွက်အပြည့်အဝဖြန့်ချိဂိမ်းများရှိသည်မှာထိုင် ၂၅ ပေမယ့်လည်းရှိငါးဂိမ်းခုနှစ်တွင်သင့်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်လအနည်းငယ်။ အဟောင်းတွေဂိမ်းဆဲခံယူထေးအယွင်းအဖြစ်အကြောင်းအရာနှင့်မွမ်းဖို့အချိန်ကနေအချိန်:မကုန်အံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းပုပ်!
ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအဓိကဒီဇိုင်းနှင့်အတူစားပွဲတင်သတိရသောကြောင့်၊ကျနော်တို့လူတွေအားလုံးကိုအသုံးျ၏ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ထဲမှမည်သည့်စက်ကိရိယာလို့ရတဲ့အပိုင်း-ခေတ်မီတဲ့ဗားရှင်းများ၊ရှု၊မြေခွေးသို့မဟုတ်အော်ရှိသည်ဖို့အပ်သောအဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုသမျှကစားစိတ်ကူးစုဆောင်းခြင်းများလိင်ဂိမ်းများ။ ဤသည်ဟုဆိုလိုသည်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတက်ဘလက်အဖြစ်မိုဘိုင်းဖုန်းများတွေ့လိမ့်မည်လျင်မြန်စွာနဲ့အဆင်ပြေမှဝင်ရောက်ခွကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝဂျီ၏ထူးခြားသောဂိမ္း:ငါတို့သည်လည်းတပြိုင်တည်းပြည်ထောင်စုကယ်နိုင်အောင်သင်ချောမွေ့စွာသူတို့ကိုအကြားအကူးအပြောင်းမရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။, အောင်မြင်မှုများလည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏ကိုယ်စားအောင်သင်၏လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါအားလုံးသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုများအဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယျသို့စက်ကိရိယာအသုံးပြုကြပါတယ်။ ကိုယ့်သေချာသင်အမြဲဝင်မည်သုံးပြီးတူညီသောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်:သင်သည်မကျင့်လျှင်ဤသို့ပြု၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှကယ်တင်သို့မဟုတ်တိုးတက်မှု။ ထို့အပြင်အကျဉ်းကိုကနေတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားလုံးနီးပါးဖုန်းအတွက်၊ငါတို့သည်လည်းသတိပြုကြောင်းသင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ကိုဒေါင်းလုဒ်ရန်လိုအပ်သည်တစုံတခုကိုမျှအမေရိကန်ကနေတိုက်ရိုက်။ ရှိပြီးသားအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အမှုအရာအွန်လိုင်း:ကျနော်တို့ပြုပါရန်ဆန္ဒရှိရှုပ်ထွေးဒီရှိခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ဆုပ်ကိုင်အရွယ်ရောက်-ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်
အနာဂတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ Newgrounds ရှာနေတာတော်တော်လေးမင်းအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊နှင့်အကြောင်းသာစဉ်းစားသောအမှုအရာသည်ငါဖြစ်ခွင့်ပြုကြောင်းပြောဖို့! ပထမဦးဆုံးဖွင့်၊အတွက်လာမည့်ခြောက်လအတွင်း၊ကျနော်တို့အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖို့လုံးဝအခမဲ့အပြည့်အဝတစ်လုံးကိုပြွန်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ထဲသို့ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ Newgrounds စောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှအကောင်းဆုံးယိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်အတူအဖြစ်မှန်ဘုရင်၊Brazzers၊ဘန်သတ္တုတွင်းနှင့်တော့–လို့ပြောလုံလောက်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်သင်၏ပြာကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်က၊သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖုံးအုပ်!, ကျွန်တော်လည်းအဖက်ဆာဗာဒီတစ်ပတ်လိမ့်မည်ကြောင်းအများပြည်သူရရှိနိုင်သောအတွင်းလာမည့်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲ:ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်များအရာပြီးသားအွန်လိုင်း။
ဒါကြောင့်၊အပေါ်အခြေခံကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်ဖတ်ပြီးပါပြီဒီတော့ဝေး–သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? သင်ကြိုက်လျှင်အသံကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်ဘာနှင့်အသင်ချင်ဖမ်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခမဲ့အကောင့်အခုအချိန်မှာ၊ယခုရှေ့ဆက်သွားနှင့်အတိအကျကိုပြုမည်။ သင်ရှိပါကဒီဝေးဖတ်ပြီးကဲ့သို့မြည်ပါဘူးလက်ဖက်ရည်သင်တို့၏ခွက်ဖလား၊ကောင်းစွာအဘယ်ကြောင့်သွေးထွက်သံယိုငရဲသင်စာဖတ်ခြင်းစောင့်ရှောက်? စောင့်ရှောက်မှုယူ၊မင်္ဂလာ fapping သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!